Arooska miisaanka: qurxinta. Dharka aroosadda, bouquet for arooska ninti.
Arooska malaayga: isbeddel dhacaya xilli-ciyaareedka
Dhibaatooyinka xilliyadii ugu dambeeyay ayaa weli ah midka ugu sarreeya. Waxay isku daraysaa xusuusta qabow ee cagaarka buluuga iyo cagaarka. Rijeetada midabka kulul ayaa cusbooneysiin kara xagaaga kulul, guga waxuu u muuqdaa mid weyn oo qulqulka iftiinka qoraxda. Maanta waxaan ka wada hadli doonaa nidaamka midabada leh ee la doonayo in lagu abuuro arooska.
Waa in la ogaadaa in caleemaha canabka ahi leeyahay tereh gebi ahaanba duwan - muraayad madow oo madow. Laakiin isku dar ah midabada buluuga ah iyo cagaarka ayaa loo magacaabay sababta oo ah caano iyo nadiif, waxay siin kartaa raaxo iyo dareen raaxo leh. Aroosyada oo doorto madadaalo ee qurxinta arooska waa mid furan, socosho iyo saaxiibtinimo. Dhinaca kale, waxay doonayaan in ay ka baxsadaan naqshado qaas ah, si ay u hirgeliyaan fikrado xiiso iyo hal abuur leh (matalan, si ay u sameeyaan xaflad beach ama dib-u-celin ah), dhinaca kale - gabdhaha sida firfircoon ula socdo oo si taxadar leh u barto talooyinka dhaliyeyaasha arooska. Golaha, doorashada qorshaha midabada ee dabaaldegga, iska tuur daboolka garaacidda iyo isku-dhafka, si taxadar leh u baro waxa sawirada midabka midab-sameyska jira oo isku day inaad sameysatid qurxintaada gaarka ah. Waxay noqon doontaa mid cusub oo dhalaalaya.
Maxaa loola jeeda midabka midabka?
Iyadoo ay ku xiran tahay foosha iyo darajada muujinta ee mugdiga buluuga ama cagaaran, subaxda soo socda ee roodhida waa kala duwan yihiin: Menthol, lafa yare, fiiqan. Dhammaantood waxay si fiican isugu xiran yihiin tifaf tirka qulqulka ah: beige, bacli, caano, miro, miro. Maqsinnada leh cagaarka cagaaran waxay si gaar ah ugu wanaagsan tahay miro-casaan. Isku-dhafka caadiga ah ee ku habboon arooska waa muraayad ama turquoise iftiin leh caddaan. Ku dar waraaqo diirran oo la adeegsan karo fuchsia ubax, casaan cad, rujin ama casaan.
Isku darka naasaha iyo dahabka, iyo sidoo kale cagaaran-turquoise iyo lacag, waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo bandhigto guulaha raaxada iyo sharraxa. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in si fiican loo qaato midab casaan ah. Taariikhdu waa dahab-beige.
Khaladaadka diiwaan gelinta
Iska ilaali halbeeg. Baaxadda midabka midabka ah waxay muujin kartaa dhadhan xun iyo awood darro ah in lagu daro hooska.
Intaa waxaa dheer, ha ku dhaafin midabyo dhalaalaya. Haddii aad dooratay keynote ah, waa in aadan ku darin emerald, casaan iyo fuchsia isla waqti isku mid ah. Xaaladdan, midnimada lafdhabarashada ayaa lumay.
Midab casaan ayaa kuu oggolaanaya inaad dooratid wax kasta oo arooska ah: laga bilaabo xafladaha xeebta si ay u noqdaan kuwo retro ah. Waxaanu bixinaa fikrado xiiso leh oo asal ah.
Doorashada dib u celinta. Bartamihii qarnigii ugu dambeeyey midabka midabkiisu wuxuu soo maray ubaxiisa. Gaar ahaan caan ah waxay ahayd saxanka cagaaran-buluuga ah. Waxaan soo jeedineynaa inaan diirada saarno qaabeynta miiska. Dooro suxuunta dharka leh, isku dar midabka-cagaarka leh laf-dhabarka laf-dhabarka. Waxaa loo baahan yahay miis macaan. Ku rid dhejiyo sare leh dhejisyo midab leh oo afka lagu furo. Sida nidaam ubax ah, isticmaal peonies caddaan ah oo ku jira muraayadaha quraaradaha quraaradaha. Daryeel gaar ah waa in la siiyaa martiqaadyada. Waa inay ahaataa kaarar qafiif ah oo leh khafiif ah oo khafiif ah, baqshado leh shaabad shub ah.
"Dabaaldegga beerta." Waxaan soo jeedineynaa inaan qabanqaabino xaflad ka baxsan beerta ubaxa ama beerta, laakiin isla markaa ka fogow qaabka tuulada. Faahfaahinta oo dhan waa sida fudud oo loo naqshadeeyey ugu macquulsan; midabada ugu weyni waxay kuxiran yihiin faragalinta buluug iyo dahab. Qorshaha ubaxa, caddaanku wuxuu sare u kacaa. Marti-qaadku waa inuu ahaado shaqo dhab ah oo farshaxan leh qurxiyo dahab ah oo qurux badan. Qurxinta dhexe ee miiska dhalinyarada waa dhalooyin dahab ah oo leh champagne, iyo turjumaadda ugu muhiimsan-turquoise waa dharka naasaha.
Midabada mantoolka ee dabeecadda waa dhif. In la abuuro backa marmar ah orchids ku habboon.
Cymbidium, hydrangeas, iyo sidoo kale qaboojin, rinji saxan saxda ah. Ha ilaawin cagaarka: suldooyinka, cunnuggii, dhuunjirta, cineraria.
Midabka saxda ah waxaa lagu gaari karaa iyadoo la adeegsanaayo walxaha lagu qurxiyo: midabada macmalka ah ee ka sameysan dharka ama dhoobada polymer, dhagxaanta, qoob-ka-riixyada iyo qaansooyinka, iwm. Qalabkani waa dabacsan yahay midabka cad ama casaan.
Aroosyada arooska moobiilka ah ayaa ku yaala ururinta oo ku dhowaad dhammaan naqshadeeyayaasha moodada ah. Caanaha ugu caansan xilligan xaadirka ah waa muraayadaha lafdhabarta ah iyo mintiga. Qalabka ugu muhiimsan waa gyps, organza, silk. Silhouette qaab-dhiska oo dharka ah waxaa ku xiran ruffles, ruffles, qaansooyinka. Iftiinta dheeraadka ah waxay ku siisaa dhoobada dahabka ama alaabta.
Marada dharka arooska ma aha inay noqoto mid xiitaa. Waxay ku haboontahay in lagu eego dhamaystirka lacagta, faahfaahinta ciida, ciirta ama casaanka.
Haddii aad doorbido inaad bixiso lacag caddaan ah, iyo sidoo kale dhaqanka loogu talagalay dharka dharka arooska ee fool-maroodiga ama champagne, ha dafirin naftaada inaad ku nasato iyaga oo leh muraayad qurux badan ama feeraha. Xasuuso in faahfaahin cad oo ah in la ilaaliyo iyadoo la adeegsanaayo kabaha ku jira codka iyo bouquet ku habboon.
Marka ugu sarraysa ee caan ah iyo naas-midab-color. Waxay noqon kartaa mid midabkeedu yahay ama qaabka "Faransiis".
Haddii aad rabto in laguugu yeero sida aroosadda ugu quruxda badan, ka dibna beddelo ilxad dhaqameed leh ubax weyn ama hareer. Faahfaahin ku habboon faahfaahintaani waxay ku eeganayaan isboortiga iyaga oo dharka toosan ku jira qaabka Giriigga.
Arooska jaallaha ah: abaabulo fasax cadceed ah
Arooska cagaaran: qarsoodiga naqshadda
Arooska Orange: Dhibco badan oo kulul
Arooska Lilac: fanka ee jacaylka iyo naqshadeynta
Guur ku habboon: ujeedo iyo ka hor
Qandaraaska guurka iyo sifooyinka
Waxaan leenahay xisbigii aan hore u marin habka asalka ah - ciyaaro xiiso leh, fikrado
Codsashada xafiiska diiwaangelinta
Cunto iyo cunto caafimaad leh
Sida loo bixiyo edbinta carruurta
Horseradish leh beetroot
Sidee loo daryeelaa maqaarka dhaadheer?
Tuna leh jiis
Sida loola jilicsan yahay dumarka
Sida loo doorto saliid saliideed oo tayo leh
Qalabka qaboobaha xilliga dayrta-qaboobaha 2009-2010
Keega guriga lagu sameeyo oo la dubey
Sidee ayaad ugu qancin kartaa ninkeeda inay haysato ilmo labaad
Shirarka qurxinta iyo blouses: guga-xagaaga 2014
Miisaaniyadda ganacsiga ee dharka: saddex sawir oo xagaaga ah
Qodobka loogu talagalay nadiifinta dubista: charlotte
Maxaa dhacaya haddii ninku uusan lahayn qoys?
Halkee ayey jinsigu ku dhacdaa nolosha qoyska iyo sida loo badbaadiyo?
Ugu sareeya 5 noocyada ugu caansan ee kafeega adduunka
Fugas oo leh geedaha Provencal